ချစ်သူအပေါ် သဝန်တိုစိတ်တွေကို ဒီနည်းလမ်းတွေနဲ့ ပြန်ထိန်းချုပ်ပါ - Hello Sayarwon
စိတ်ကျန်းမာရေး » အစိုးရိမ်လွန်ခြင်းနှင့် ကြောက်ရွံ့ခြင်းများ
Update Date စက်တင်ဘာ 13, 2021 .2mins read
လူတွေကတော့ ချစ်ရင် သဝန်တိုကြတာပဲလို့ အလွယ်ထင်တတ်ကြပါတယ်။ တော်ရုံတန်ရုံလောက် ချစ်သူအပေါ် သဝန်တိုတာတော့ နားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးလို့ ရပေမယ့် အတိုင်းအတာ တစ်ခုထက် လွန်ကဲသွားရင်တော့ ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်ကျန်းမာရေးသာမက ချစ်သူနဲ့ ဆက်ဆံရေး ပြတ်တောက်သွားတဲ့အထိ အခြေအနေ ဆိုးသွားတတ်ပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးမှာ ချစ်သူအပေါ် တစ်ခုခုဆို သဝန်တို စိတ်ကောက်နေတတ်တဲ့ သူတွေ အထူးသဖြင့် မိန်းကလေးတွေအတွက် ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်ကို ဘယ်လို ထိန်းချုပ်ရမလဲဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။
၁။ သဝန်တိုခြင်းသည် ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်မလုံခြုံမှု၊ ကြောက်ရွံ့မှု၊ အတိတ်က စိတ်ဒဏ်ရာတွေ စတဲ့ ပြဿနာတွေကြောင့် ဖြစ်ရတဲ့ အမူအကျင့်တစ်ခုပါ။ ဒါဟာ မှားယွင်းတာ မဟုတ်ပေမဲ့ ထိန်းမနိုင်အောင် သဝန်တိုလွန်းတဲ့အခါ ကိုယ့်ကို ချစ်တဲ့သူတွေ စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုတာ သတိပြုပါ။
၂။ ကိုယ့်ရဲ့ တန်ဖိုးကို ကိုယ်ပြန်တွက်ကြည့်ပါ။ ကိုယ်ဟာ ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်လောက် အရည်အချင်းရှိလဲ၊ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူတွေ အပေါ် ကိုယ်ဘယ်လောက် ကောင်းပေးနိုင်ခဲ့လဲ၊ လူတွေမျက်နှာမှာ အပြုံးပန်းပွင့်နိုင်အောင် ကိုယ်ဘယ်လိုတွေ အပင်ပန်းခံပေးခဲ့လဲ စတာတွေကို ပြန်တွေးကြည့်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အကောင်းမြင်ပါ။ မိမိကိုယ်ကိုယ် တန်ဖိုးထားတတ်တဲ့ စိတ်တွေ ဖြစ်လာပြီဆိုရင် သဝန်တိုစိတ်တွေက နည်းသွားနိုင်ပါတယ်။
၃။ ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သဝန်တိုစရာ အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာ ပေါ်လာခဲ့တယ် ဆိုကြပါစို့။ အဲ့ဒါကို တရားခံ အပြစ်ထုတ်သလို မေးနေမယ့်အစား ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း တိုင်ပင်တဲ့ ပုံစံမျိုး ဆက်ဆံပါ။ ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ ဖြစ်နေတဲ့ ပြဿနာတွေကို နည်းလမ်းမှန်နဲ့ ထုတ်ဖော်ပြသခြင်းဟာ ကိုယ့်ချစ်သူကိုလည်း ဒီအမှားတွေ မလုပ်မိစေဖို့ တိုက်တွန်းရာ ရောက်ပါတယ်။
၄။ တစ်ခါတလေ ကိုယ် သဝန်တိုနေတဲ့ အကြောင်းအရာက တိကျသေချာမှုမရှိဘူး၊ သက်သေမရှိဘဲ ကိုယ့်စိတ်ကပဲ ထင်နေတာဆိုရင် ချစ်သူနဲ့ မတိုင်ပင်ဘဲ ယုံကြည်ရတဲ့ သူငယ်ချင်းနဲ့ တိုင်ပင်တာ ပိုကောင်းပါတယ်။ ကိုယ်ခံစားနေရတာ၊ ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ ဖြစ်နေတယ်လို့ ထင်နေတဲ့ အရာတွေကို ရင်ဖွင့်ပြီး ဘာကြောင့် ဖြစ်နိုင်လဲ၊ ကိုယ့်ဘက်က သက်သက်မဲ့ သဝန်တိုနေမိတာလားဆိုတာ အဖြေရှာပါ။
၅။ အလုပ်တစ်ခုခု ထလုပ်ပါ။ လူတွေက စိတ်ရှုပ်စရာအတွေးတစ်ခု ခေါင်းထဲ ဝင်လာပြီဆိုရင် အဲ့ဒါကိုပဲ တစိမ့်စိမ့် အရသာခံတွေးပြီး ကိုယ့်စိတ်ကိုယ် ဒုက္ခပေးနေတတ်ပါတယ်။ ကြာလာတော့ ပြဿနာသေးသေးလေးကနေ ယမ်းပုံမီးကျ ပေါက်ကွဲသလို ဖြစ်ပြီး ပိုဆိုးသွားနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် မျိုသိပ်ထားစရာမလိုပါဘူး။ ဒီစိတ်တွေ အဝေးကို လွင့်ထွက်သွားအောင် အလုပ်တစ်ခုခု လုပ်တာ၊ အိပ်ပစ်လိုက်တာမျိုး လုပ်ကြည့်ပါ။
၆။ တစ်ယောက်ယောက်က ကိုယ့်ချစ်သူကို ဖြားယောင်းသွေးဆောင်းနေတယ်ဆိုပြီး သံသယတွေ ဝင်လာတဲ့အခါ ဘယ်သူမဆို သဝန်တိုစိတ် ဖြစ်မှာ အသေအချာပါပဲ။ တစ်ဖက်လှည့်အနေနဲ့ ကိုယ့်ချစ်သူဟာ ကိုယ့်ကို တကယ် ချစ်တာ သေချာတယ်၊ အဲဒီအတွက် သစ္စာမဲ့တဲ့ လုပ်ရပ်မျိုး ဘယ်လိုလုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူး ဆိုပြီး ပြောင်းတွေးကြည့်လိုက်ပါ။ အနည်းဆုံးတော့ မကျေနပ်မှုတွေနဲ့ သွားပြီး ရန်ရှာတာထက်တော့ ပိုအဆင်ပြေမှာပါ။
၇။ ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်ကို အေးချမ်းအောင် အရင်တည်ဆောက်ပါ။ တစ်ခုခု စိတ်တိုစရာ၊ ဒေါသထွက်စရာ ရှိရင် လူက အသိစိတ်တွေ လွတ်ပြီး ပြောချင်ရာပြော၊ လုပ်ချင်ရာ လုပ်တတ်ပါတယ်။ သူ့အမှားကနေ ကိုယ့်စကားကြောင့် အမှားဖြစ်သွားရင်တော့ နှစ်ဖက်လုံးအတွက် အဆင်မပြေနိုင်ပါဘူး။ ဒီအတွက် စိတ်ထဲမှာ မကျေနပ်စရာတွေ ဖြစ်လာရင် အရင်ဆုံး ကိုယ့်စိတ်ကို ငြိမ်နေအောင် ကြိုးစားကြည့်ပါ။ တရားထိုင်တာ၊ ယောဂကျင့်တာ၊ အသက်ရှူလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာ၊ စာဖတ်တာ အစရှိတဲ့ နည်းလမ်းတွေကို လုပ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
၈။ ကိုယ့်ဘဝအတွက် အဆင်မပြေတဲ့ လူတစ်ယောက်ကို အပင်ပန်းခံပြီး ဆွဲမထားပါနဲ့။ ကိုယ့်ချစ်သူက ကိုယ်ဒီလောက် ပြောထားတဲ့ကြားကနေ သံသယဖြစ်လောက်စရာ အပြုအမူတွေ ခဏခဏ လုပ်တယ်၊ ရန်လည်း ခဏခဏ ဖြစ်ရတယ်၊ သတင်းတွေလည်း ကြားရတယ်ဆိုရင် စောစောစီးစီးသာ လက်လွှတ်လိုက်ပါ။ ကိုယ့်ကို တကယ်ချစ်တဲ့သူတစ်ယောက်က ကိုယ့်အယုံအကြည်ပျက်လောက်စေမယ့် အပြုအမူမျိုးကို လုပ်ဖို့ စဉ်းစားနေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်း ဒါဟာ ကိုယ့်ဘဝအတွက် မသင့်လျော်တဲ့လူတစ်ယောက်ဆိုတာ သူကိုယ်တိုင် သက်သေပြလိုက်တာနဲ့ အတူတူပါပဲ။ ဒီအတွက် သဝန်တိုစိတ်တွေနဲ့ စိတ်ကို အလောင်ခံပြီး ဆွဲမထားဘဲ လွှတ်ပေးလိုက်ပါ။
ချစ်သူရည်းစားဘဝမှာ သဝန်တိုခြင်း၊ အဆင်မပြေမှုတွေကတော့ အမြဲလိုလို ကြုံတွေ့နေရမှာပါပဲ။ ဒီပြဿနာတွေကို အတူကျော်လွှားသွားနိုင်ဖို့၊ ကိုယ်ရွေးချယ်ထားတဲ့ ချစ်သူဟာ ကိုယ့်တစ်ဘဝလုံးစာအတွက် သင့်လျော်တဲ့သူ ဟုတ်တယ်ဆိုတာ ကိုယ့်ဘက်က သေချာနေဖို့ပဲ လိုတာပါ။ ဘေးလူဆိုတာ ဘယ်လောက်ပဲ ပြဿနာပေးနေပါစေ၊ ကာယကံရှင် နှစ်ယောက်က မတုန်လှုပ်ရင် သူကိုယ်တိုင်လည်း ဘာမှစွမ်းနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲ့ဒါကြောင့် မလိုလားတဲ့ သဝန်တိုစိတ်တွေနဲ့ ကိုယ့်စိတ်ကို အရမ်းကြီး ပူလောင်မခံပါနဲ့။ ဘဝမှာ ဒါ့ထက် ပိုအရေးကြီးတဲ့ လုပ်စရာတွေ အများကြီးရှိပါသေးတယ်။
https://www.healthline.com/health/how-to-not-be-jealous#be-mindful (May 30, 2020)
အသံ တွေ ခဏခဏ ပြန်ကြားနေရတာ၊ သူများမကြားဘဲ ကိုယ်ပဲ ကြားနေရတာက စိတ်ရောဂါမဟုတ်ပါဘူး။ ရက်ပိုင်းလောက်နေရင် သက်သာသွားပါလိမ့်မယ်။
စိတ်ကျန်းမာရေး, စွဲလမ်းမှုပြဿနာများ ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 16, 2021 .2mins read
ဘယ်လေ့ကျင့်ခန်း အမျိုးအစားက ဘယ်လောက် ကယ်လိုရီလောင်ကျွမ်း စေသလဲ ဆိုတာကို သိထားဖို့လိုပါတယ်။ ဒါမှ ကိုယ့်လိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီး ကစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Psywar တွေ ကြားမှာ စိတ်ကျန်းမာနေစေဖို့
Psywar တွေက ကြောက်ဖို့ ကောင်းတာ မှန်ပေမယ့် လက်ခံတဲ့သူပေါ် မူတည်ပါတယ်။ လက်ခံတဲ့သူက ပါးနပ်ရင် ပါးနပ်သလောက် Psywarတွေကို ကျော်ဖြတ်နိုင်ပါတယ်။
စိတ်ကျန်းမာရေး, အခြားစိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာများ ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 11, 2021 .3mins read
Body Language လို့ခေါ်တဲ့ ကိုယ်အမူအရာ ဟာ လူအချင်းချင်းဆက်ဆံရေးမှာ သိပ်ကိုအရေးပါလှပြီး စိတ်နေစိတ်ထား၊ စိတ်ခံစားချက်နဲ့ အမူအကျင့်တွေကို ပြောပြနိုင်ပါတယ်
အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကျန်းမာရေး, အအေးမိဖျားနာခြင်း ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 11, 2021 .2mins read
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် ဩဂုတ် 24, 2021 .2mins read
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် မတ် 1, 2021 .2mins read